Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Avrily, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Avrily, 2014
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Avrily, 2014
Syria: “Roa Taona Aty Aoriana, Mbola Tsy Milamina Izahay “
Syria 30 Avrily 2014
Asehon'ilay Syriana Hiba Diewati ao amin'ny lahatsoratra tsy maintsy vakiana ao amin'ny Facebook ny toe-draharaha ao amin'ny fireneny amin'ny tsingerin-taona fahatelon'ny fitakiana fiovàna Syriana.
Iràna 28 Avrily 2014
Israely 28 Avrily 2014
Nanao fanamby tamin'ilay kabary iraisan'ny Israeliana milaza fa tsy nisy velively i Palestina ireo mpampiasa Twitter, tamin'ny alàlan'ny tenifototra : #there_was_no_Palestine (tsy_nisy_i_Palestina).
Tonizia: “Izaho Koa Efa Nandrehitra Tobinà Polisy”
Tonizia 27 Avrily 2014
Naka ny tambajotra sosialy mba hiampangàna ny fanenjehana ara-pitsarana ireo mpanao hetsi-panoherana tamin'ny 2011 ampangaina ho "nandoro tobinà polisy" ireo Toniziana mpisera ety anaty aterineto.
Alzeria 25 Avrily 2014
Syria 23 Avrily 2014
Tontolo Arabo: Veloma Farany Hoan'i Gabriel Garcia Marquez
Alzeria 19 Avrily 2014
"Malahelo ny foko androany alina," hoy ny siokan'ilay Jordaniana Shaden Abdelrahman taorian'ny nandrenesany ny fahafatesan'ilay Kolombiana nahazo ny loka Nobel antsoina hoe Gabriel Garcia Marquez.
Taratasy Nosoratana Iraniana Mpitoraka Bilaogy Voafonja Miresaka Momba Ny Fampijaliana Azy
Iràna 18 Avrily 2014
Nanoratra taratasy iray azo vakian'ny olon-drehetra tao anatina efitrano kely iray mifefy vy miaraka amin'ireo mpiray efitra aminy miisa 40 ilay mpitoraka bilaogy fantatra amin'ny anarana hoe Siamak Mehr. Manefa sazy mandritra ny 4-taona izy nohon'ny nanoratany lahatsoratra iray tao anatin'ny bilaoginy.
Ny Tambohoben'i Berlin Ho Anay Ao Siria
Syria 17 Avrily 2014
"Siriana Mpianatra Mikatsaka Hoavy Mendrika Kokoa" dia bilaogy tantanan'ireo Siriana nahazo vatsim-pianarana, izay mizara ny alahelony ny tany niaviany, ny fanantenany, ny fisalasalàny, ny ahiahiny, ny fahatokiany ary ny fanirian-dry zareo hisian'ny Siria mendrika kokoa.
Blaogy Toniziana Namoaka Sehatra Mpiampanga (Mpamoaka Tsiambaratelo Miafina)
Tonizia 15 Avrily 2014
Namoaka ny sehatra mpiampanga azy manokana ny blaogy toniziana iraisana efa nahazo loka, ary ny anaran'izany dia Nawaat Leaks.